Singangena kanjani amasampuli?
Yebo, singakwazi ukunikela isampula khulula ngawe ukuhlola izinga. Nokho kufanele ukhokhe yezimpahla.
Ingabe singazi ukuyiprinta phezu amabhodlela?
Impela. Ezihlukahlukene izindlela zokunyathelisa siyonikwa, ezifana usilika wokunyathelisa kwesikrini, wokushaya ashisayo nowokunyathelisa esiliva. Futhi thina zingakhiqiza frosting, umbala sishaye, decal, wokucwebezelisa, Plating kanye ilebula Isitika njll
Kuyoze kube nini isikhathi sakho ukukhiqiza?
Ngokuvamile idinga mayelana 15-20days.
Yini inkokhelo yakho?
T / T, u-30% T / T ukukhokhelwa kusengaphambili, 70% ibhalansi ikhokhwe ngokumelene ikhophi BL. L / C at emehlweni yamukelwe.
Ungakwazi yini ukwenza isikhunta entsha nge usayizi ngokwezifiso ngidinga?
YEBO, Singenza isikhunta ngawe
Uyini isikhathi evamile phambili?
Ukuze imikhiqizo isitokwe, sizokuthumela impahla kuwe zingakapheli izinsuku umsebenzi 7-15 emva sithola payment.For yakho neminye imikhiqizo, izinsuku 35-45 emva kokuthola 30% T / T idiphozi noma L / C at emehlweni
Uma kukhona amabhodlela engaphelele futhi ephukile, ungabhekana kanjani ukuyixazulula kithi?
Sizokwenza esikhundleni amabhodlela engaphelele futhi ephukile ukuze wakho olandelayo noma njengoba kudingwa usuku.
Kanjani kokulawula kwakho izinga?
Sine siqu 3rd ingxenye QC ithimba lethu ukuzohlola oda ngalinye uma kunesidingo.
Singabakhetha kanjani indlela lokuthumela?
Ukuze oda elincane, sizobe ukuphakamisa ukhetha express, ezifana DHL, FedEx, UPS, TNT, etc.For oda emikhulu, sizobe ukuphakamisa ukhetha ngu sea.If wena esiphuthumayo, ungakhetha ngendiza. sizokusiza ukuthi ukukhetha okuhle kakhulu eficient lokuthumela indlela ngokusho izidingo zakho ngemininingwane.
Soho-No.2-1-908, uWanda Plaza, Yunlong District, Xuzhou City